editor, Author at My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ရေများများသောက်တိုင်းကောင်းသလား? လူခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုရဲ့70%ကရေဓာတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေဓာတ်ကလူခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးကြီး ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့စဉ်ရေကိုများမျာသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။တစ်နေ့ကိုလူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ရေ ၂ လီတာ (ရှစ်အောင်စ )သောက်သုံးသင့်တယ်လို့စာတမ်းတွေအရပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဘယ်အရာမဆိုတန်ဆေးလွန်ဘေး ဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သောရေပမာဏထက်ပိုပြီးသောက်နေမိပြီဆိုရင်အောက်မှာပြောပြပေး ထားတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်————— ကဲ—–ဒါဆိုရင်ဒီအချက်လေးတွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်————– (၁)ဆီးသွားတဲ့အခါ ဆီးအရောင်ဖြူဖွေးလာခြင်း။ (၂)ညအိပ်ချိန်တွင်ဆီးခဏခဏသွားခြင်း။ (၃)ပျို့အန်ချင်လာခြင်း။ (၄)နားများအူလာခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ (၅)လက်များ၊ခြေများဖောလာခြင်း။ (၆)ခြေထောက်အလွယ်တကူကြွက်တက်ခြင်း။ (၇)ခြေကုန်လက်ပန်းကျ၍မောပန်းသလိုခံစားရခြင်း အစရှိတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေခံစားရနိုင်လာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကတော့…
စားစရာလေးတွေနဲ့မျက်နှာပေါင်းတင်ကြမယ် အခုခေတ်မှာဆိုရင် အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ် အတော်များများကမျက်နှာအသားရေလှပဖို့အတွက် ပေါင်း တင်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာ တစ်ချို့ကတော့ Spa တွေသွားပြီတင်ကြသလိုတစ်ချို့ကအိမ်မှာ ပဲကိုယ့်ကို maskလေးတွေလုပ်ကြပါတယ်။အိမ်မှာပဲmask လေးတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးပေါင်းတင်ကြမဲ့သူတွေအတွက် စားစရာ လေးတွေနဲ့ မုန့်လည်းစားရင်းပေါင်းလည်းတင်ရင်းလုပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (၁)Cocoa Powder ဒီနည်းလေးကတော့ပေါင်းတင်ပြီးသွားရင်မျက်နှာအသားအရေလေးက ကလေးလေးလိုနူညံ့သွားမှာပါနော်။ဒီ Mask လေး…
နေရောင်အောက်ထွက်တဲ့အခါ အသားရည်မပျက်စီးအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ။? အခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ လူတိုင်းက အသားအရည်ထိန်းသိမ်းမူကိုပိုပြီးဂရုတစိုက်နဲ့လုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ အသားအရည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရာတွင် အရေးကြီးသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့နေရောင်ခြည်ဒဏ်(UV)မှာကာကွယ် ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သိပ်မကြာခင်မှာဆိုရင် ဆောင်းရာသီကုန်ဆုံးပြီးပူပြင်းလှတဲ့နွေရာသီရောက်လာတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်အသားအရည်အတွက်မပျက်စီးအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းသင့်လဲဆိုရင်တော့————- (၁)လုံခြုံစွာဝတ်စားသွားပါ။ နေရောင်ခြည်ထဲသွားတော့မယ်ဆိုရင်ဘောင်းဘီရှည်နှင့် ချည်သားအင်္ကျီလက်ရှည်ကိုဝတ်ဆင် သွားသင့်ပါတယ်။ (၂) နေကာမျက်မှန်ကိုတပ်ဆင်ပါ။ကိုယ့်အတွက် ဖက်ရှင်ကျစေနိုင်သလို မျက်စိကိုလည်း(UV…
အေးမြသော ရာသီဥတုကြောင့် ရရှိလာနိုင်မယ့် ကျန်းမာရေးအကျိုး(၅)မျိုး (၁)ဦးနှောက်၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေခြင်း ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုလျော့ချဖို့အတွက် glucose ကိုလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးအသုံးပြုရပါ တယ်။ထိုအခါမှာ ဦးနှောက်က လိုအပ်တဲ့ glucose ကိုအလုံအလောက်မရနိုင်တဲ့အတွက် စဉ်းစားတွေးခေါ်မူများကိုပြုလုပ် ရာတွင်ထင်သလောက်အကျိုးအများအပြားမရနိုင်ပါဘူး။သို့သော် အေးသောရာသီဥတုမှာဆိုရင်တော့ ဦးနှောက်ကလိုအပ် တဲ့ glucose ဓာတ်ကိုအလုံအလောက်ရရှိတာကြောင့် ပိုမိုအဆင်ပြေစွာစဉ်းစားတွေခေါ်မူတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါ…
နဂိုရှိရင်းစွဲထက်ပိုပြီး ဉာဏ်ကောင်းစေလာဖို့ ဦးနှောက်အတွက်လိုအပ်သော လေ့ကျင်းခန်း(၁၀)မျိုး လူအများစုပြောကြတဲ့ ဦးနှောက်ကမစဉ်းစားဘဲနေရင်တုံးသွာတယ်ဆိုသလိုမျိုးဘဲဦးနှောက်ကိုထက်မြတ်စေဖို့ အတွက် နေ့စဉ် ဦးနှောက်ကိုအသစ်သော လုပ်ဆောင်မူတွေလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်မူတွေ လုပ်ဆောင်ပေးရမယ်ဆိုတာကတော့ အောက်မှာတစ်ချက်စီဖော်ပြပေးထားတာမို့ဆက်လက်ဖက်ရှူပေးကြပါနော်…….. —ကိုယ်ပုံမှန်သွားတိုက်နေကျပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲပုံစံပြောင်းပြီးတိုက်ကြည့်ပါ။နဂိုကညာဘက်လက်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုရင် အခု ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပြောင်းတိုက်ကြည့်ပါ။ –မနက်ခင်းမှာကိုယ်ပုံမှန်လုပ်နေကြအရာမဟုတ်ဘဲအခြားမတူသော်အရာများကိုလုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရ မယ်ဆိုရင် အရင်ကကြည့်နေကျTVလိုင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲလိုင်းပြောင်းကြည့်တာမျိုး၊အရင်ကမနက်စာစားပြီးမှ အပြင်ထွက်ဖို့ အင်္ကျီလဲတယ်ဆိုရင် အခုအကျီၤလဲပြီးမှ…
“ဝမ်းတစ်လုံးကောင်းဖို့ခေါင်းမခဲရအောင်” ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝနေထိုင်မှုမှာ ဝမ်းပုံမှန်မသွားတာ၊ဝမ်းမချုပ်ခြင်းပြဿနာကိုအမြဲကြုံတွေနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်လူနေမှုပုံစံထဲက ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်တွေနဲ့ ဝမ်းချုပ်ခြင်း မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင် ကြမလဲကိုစာဖတ်သူတွေ အတွက်ဗဟုသုတရစေဖို့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ “ဝမ်းချုပ်တာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကတော့” (1)အိမ်သာမှန်မှန်တက်တဲ့ အကျင့်မရှိခြင်း။ (2)အခြေအနေအရ ဝမ်းသွားလိုသော်လည်း အောင့်ထားရမှုများခြင်း။ (3)အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ဒါမှာမဟုတ် ဝမ်းနှုတ်ဆေးများ အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း။ (4)ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံံ့ စားသုံးမှုနည်းခြင်း…